Iindlela ezi-6 eziBalaseleyo eziya kuthi zonyuse ukuthatha kwakho inxaxheba kuPhando loMthengi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 NgoMgqibelo, Agasti 27, 2016 Mike Jones
Uphando loMthengi lunokukunika umbono wokuba ngoobani abaxhasi bakho. Oku kunokukunceda ulungelelanise, kwaye uhlengahlengise umfanekiso wakho wophawu, kwaye kunokukunceda ekwenzeni uqikelelo malunga neemfuno neemfuno zabo zexesha elizayo. Ukuqhuba uphando rhoqo kangangoko unakho kuyindlela efanelekileyo yokuhlala phambi kwekhava xa kuziwa kwimizila kunye nokukhethwa kwabaxhasi bakho.
Uphando lunokunyusa ukuthembela kwabathengi bakho, kwaye ekugqibeleni, ukuthembeka, kuba oko kubonisa ukuba unomdla wokwenene kuluvo lwabo, kwaye ubeka umgudu wokubanelisa. Qiniseka ukuba wazisa abathengi bakho malunga notshintsho olwenzileyo, ngokusekwe kwingxelo yabo. Ngaphandle koko, iinzame zakho zibeka emngciphekweni wokungaqwalaselwa. Abantu badla ngoku khumbula amava amabi ngcono kunezinto ezintle, ngenxa yoko ukuphuculwa kunokungaqapheleki, kuba abathengi bakho banokukhululeka. Kwangokunjalo, inokubuyisa abanye abathengi obalahlekileyo, ukuba ngaphambili bebengonelisekanga lishishini lakho.
Ingxelo entle ngophando lwabathengi inokuphinda kabini ukuphononongwa kwenkampani. Ngokuqinisekileyo yenye indlela ebhetele yoku ukupapasha uphononongo oluhlawulelweyo okanye oluceliweyo. Qiniseka ukuba ubuza imvume kubathengi bakho, ngaphambi kokuthatha isigqibo sokwenza iimpendulo zabo eluntwini, nokuba uphando aluchazwanga.
Kukho inzululwazi epheleleyo yokwenza ukuyila iikhweshine ezilungileyo, ukuthintela iimpendulo ezikhethiweyo, kunye nokulawula ukuxubusha impendulo ethembekileyo yabantu abathatha inxaxheba kuvavanyo. Ngelishwa, zininzi izinto eziza kuchaphazela iimpendulo zabathengi bakho, kwaye uninzi lwazo zingaphaya kolawulo lwakho. Kuxhomekeke koluphi ulwazi ojonge ukulifumana, unokufuna ukubabuza ingxelo ngoko nangoko emva kwamava ofuna ukuwavavanya. Iimpendulo ziya kuba neemvakalelo ngakumbi kuba abathathi-nxaxheba baya kuwakhumbula ngokucacileyo amava abo. Kungoko besephantsi kwefuthe leemvakalelo abazidibanise nayo.
Ukuba ujonge ulwazi oluthe kratya, ke kungcono ukuba unike abathengi bakho ixesha, ngaphambi kokuba ubaphendule. Oku kubanika ithuba lokuvavanya imeko ngokucacileyo. Iimpendulo abazinikelayo azinakuze zibe nenjongo yokwenyani, kodwa le ayisiyiyo le uyithandayo nangayiphi na indlela. Abaxhasi bakho kufuneka baneliseke, okokuqala nokuphambili, kwaye ukoneliseka akuyiyo injongo.
Ubude beSaveyi yaBathengi
Ukuba ufuna ukufumana okuninzi kuphando lwakho, musa ukwenza iikhweshine eziqhubekela kumaphepha, kunye namaphepha. Abathengi bakho banokudikwa, kwaye baqale ukuphendula ngaphandle kokujonga le mibuzo, ukuze nje yenziwe. Ngokufanelekileyo, uphando lwakho akufuneki lube ngaphezulu kwemibuzo engama-30. Kwaye kuya kuthatha imizuzu emi-5 ukugqiba.
Ukuba unemibuzo engaphezulu kwama-30 oza kuyibuza, okanye ukuba ifomathi yemibuzo ithatha ngaphezulu kwemizuzu emi-5 ukuphendula, cinga ngokwaphula uluhlu lwemibuzo kuphando oluninzi. Babeke amaqela ngokomxholo wabo, ukuze uyazi into oyifunayo.
UPhononongo lwaBathengi rhoqo
Iimpawu kunye nezinto ozikhethayo ziyatshintsha ngesantya esimangalisayo, kungoko kufuneka uqhube uphando rhoqo kangangoko unakho. Oku kunika ithuba lokuphononongwa ngokukuko kwemibuzo yakho, kunye nokongeza kwimibuzo esele ishiywe ngaphambili.
Unokufuna ukuba novavanyo olubanzi oluhlala lufumaneka kwiwebhusayithi yenkampani yakho, ukuvavanya inqanaba labathengi bakho ngokubanzi lokwoneliseka ziimveliso okanye iinkonzo zakho. Kodwa ukuba ujonga ingxelo ethe ngqo, ejolise kwisifundo esithile, kunokuba kufanelekile ukuba ubhengeze olo phononongo ngokwahlukeneyo.
Uphando loMthengi Imibuzo
Imibuzo engacacanga okanye engacacanga ibeka emngciphekweni wokufumana iziphumo kuvavanyo lwakho. Ixesha lomthathi-nxaxheba kufuneka lichithwe kugxilwe kwimpendulo, hayi ukuba imibuzo ithini. Kwiimeko apho imibuzo inediski, umntu othabatha inxaxheba unokuthambekela ekukhetheni impendulo ngokungacwangciswanga. Kwaye oku kunokwenza iphatheni elahlekisayo.
Ngapha koko, abathengi bakho banokuyeka nje kuphononongo olunye, ukuba bayayifumana imibuzo engenakuqondakala. Kuya kufuneka baziva ngathi bachitha ixesha elincinci ukugcwalisa iphepha lemibuzo, ke baya kuziva bethambekele ngakumbi ekuqwalaseleni impendulo nganye ngononophelo.
UPhononongo loMthengi loMsebenzi
Zininzi izinto eziza kuchaphazela indlela abathengi bakho abaphendula ngayo uphando lwakho. Abanye banokuba nobuqili njengendlela othetha ngayo umbuzo othile, nokuba usebenzisa okanye awusebenzisi amagama banokuba nomfanekiso ongekhoyo onxulunyaniswa nabo kwanendlela obuza ngayo imibuzo.
Ukufumana iziphumo ezingcono, iziphumo ezinolwazi ngakumbi, uya kufuna ukwahluka ngendlela owakha ngayo iphepha lemibuzo. Unokubuza umbuzo ofanayo ngeendlela ezininzi, ukunqanda umkhethe ngokusekwe kumagama kunye nokuphindaphindwa, kwaye kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukudibanisa ipateni obuza kuyo imibuzo yakho.
Kwimibuzo eneempendulo ezininzi ozikhethileyo, cinga ngokuhambisa ukhetho. Ngale ndlela, uya kuthintela ukuseta uhlobo lwesiqhelo kubathengi bakho, kwaye uya kubanyanzela ukuba bacinge ngombuzo ngamnye ngokwahlukeneyo.
Imivuzo yoVavanyo lwaBathengi
Ukuba ufumanisa ukuba abathengi bakho bayathandabuza ukuthatha uphando lwakho, cinga ukubanikeza inyango encinci ukugqitywa. Iinkampani ezininzi zisebenzisa eli cebo ukukhuthaza abathengi bazo ukuba baphendule.
Nangona kunjalo, unokubeka emngciphekweni wokuba abantu bathathe isaveyi ngenxa yomvuzo, ngaphandle kokunxibelelana nenkampani yakho. Qinisekisa ukuba wongeza indlela yokuqinisekisa, ukumisela ukuba bayayazi na into abayithethayo xa bephendula imibuzo yakho. Olunye uphando lufuna ukuba ugcwalise ulwazi eshicilelwe kwirisithi. Unokongeza i-pop-ups kwiwebhusayithi yakho, enikwe ixesha lokuphuma emva kokuba kwenziwe isenzo esithile, njengokujonga kwivenkile ekwi-intanethi, okanye emva kokucofa ikhonkco elithile.
Khuthaza ingxelo eneenkcukacha
Kulo naluphi na uphando, nokuba loluphi ulwazi olufunayo, kubaluleke kakhulu ukuba unike abathengi bakho ithuba lokuba bathethe. Amagqabantshintshi aneenkcukacha anokuba sisibonelelo esibaluleke ngakumbi kunemibuzo enika ukhetho phakathi kweempendulo ezininzi.
Inqaku elipheleleyo lophando kukufumanisa izinto ongazaziyo malunga nabathengi bakho. Imibuzo kunye neempendulo eziyilwe nguwe zisetyenziswa kakuhle xa unomdla wokufumana izinto ezithile, ezingavumeli uninzi lweempawu ezahlukeneyo.
Amagqabantshintshi anokukunika ukuqonda obungenakho ukukuqikelela. Ngelishwa, kunzima ngakumbi ukuba abathathi-nxaxheba bachithe ixesha bebhala iimpendulo ezinde kunokuba kunjalo ukubanika ukhetho lokubeka uphawu kwibhokisi. Ke, nangona ujonge iimpendulo ezineenkcukacha, gcina imibuzo ilula, ke abavakali ngathi bachitha imali eninzi kakhulu kwimpendulo.
Uphando lunokuba sisixhobo esixabisekileyo xa kuziwa ekuvavanyeni amanqanaba okwaneliseka kwabathengi, kunye nokuqikelela izinto eziza kwenzeka kwikamva. Ikwonyusa ukuthembela kwabathengi bakho kwaye ibabonakalise ukuba unomdla wokwenene kubo, kunye nezinto abazithandayo kunye negalelo.
tags: ubude bophando lwabathengiiminikelo yophando lwabathengiUkulungiswa kophando lwabathengiimibuzo yophando lwabathengiimivuzo yovavanyo lwabathengiuphando lwabathengisurvey
UMike Jones uphumelele kwiDyunivesithi yaseBoston, kwaye une-MS kunxibelelwano oluninzi. Ngoku ungumbhali ngokusisigxina, unomdla ngayo yonke into enxulumene neshishini kunye netekhnoloji.